कसरी पायो लालीगुराँसले राष्ट्रिय फूलको मान्यता ? – Waikhari
गृहपृष्ठ Featured कसरी पायो लालीगुराँसले राष्ट्रिय फूलको मान्यता ?
कसरी पायो लालीगुराँसले राष्ट्रिय फूलको मान्यता ?
नेपाल भूभागभित्र सयपत्री, मखमलीजस्ता सयौँथरी फूल छन। गुराँसभित्रै अनेकौँ प्रजाति छन् तर लालिगुराँसलाई नै किन राष्ट्रिय फूल बनाइयो होला? यो प्रसङ्ग र पञ्चायतको शुरुवातबीच नजिकको सम्बन्ध छ। वनस्पति विद्हरुको सुझावलाई दरबारले ग्रहण गरेपछि पञ्चायती व्यवस्था (२०१९) यता लालिगुराँसले राष्ट्रिय फूलको पहिचान पाएको हो।